समाचार Archives - paschimelinews
पोखरा : नाबालिका बलात्कार आराेपमा जेलमा रहेका अभिनेता पल शाहकाे निवेदन उपर उच्च अदालत पाेखरामा पहिलाे सुनुवाई भएकाे छ । उनीविरुद्ध तनहुँ प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे । जिल्ला अदालत तनहुँले धराैटीमा रिहाइकाे आदेश नदिएपछि उनले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाेखरामा आवेदन दिएका हुन् । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित पललाई सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएकाे […]
चैत्र ६, २०७८ चैत्र ६, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on डा. शंकर भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त
काठमाडौं– डा. शंकर प्रसाद शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार शर्मालाई भारतका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शर्मालाई राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्र भारतका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बताए।
चैत्र ६, २०७८ चैत्र ६, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on २ डिग्रीले बढ्यो नेपालगन्जको तापक्रम
गत वर्षको तुलनामा यसपटक नेपालगन्जमा अत्यधिक गर्मी बढेको छ । १९ मार्च २०२१ मा नेपालगन्जको अधिकतम तापक्रम ३३ दशमलव ८ थियो । यस वर्षको १९ मार्चमा अधिकतम तापक्रम ३६ डिग्री सेल्सियस पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय नेपालगन्जका मौसम विज्ञान सहायक मेनका झाले जानकारी दिइन् । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष हरेक दिन एक–दुई डिग्री तापक्रम बढेको […]
दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका […]
– गोविन्द खत्री, सुर्खेत : २०७४ सालकाे निर्वाचनमा कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिक तर्फ १६ जना गरी ४० जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । जसमा एमालेबाट २०, माओवादी केन्द्रबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ जना थिए । तर, अहिले प्रदेशसभामा ३४ जना सदस्य मात्रै छन् । कार्यकाल नसकिँदै ६ जना सदस्यहरू […]
माओवादी केन्द्रका नेता दामोदर आचार्यको निधन
चैत्र ५, २०७८ चैत्र ५, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on माओवादी केन्द्रका नेता दामोदर आचार्यको निधन
पालगन्ज । नेपालगन्जका व्यवसायी अगुवा तथा माओवादी केन्द्रका नेता दामोदर आचार्यको निधन भएको छ । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित आचार्यको ५९ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो । नेपालगन्ज् उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आचार्य नेकपा मसालबाट राजनिती गर्दै पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रमा सक्रिय थिए । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट बाँके […]